Tonizia: Nampizarazara Ireo Toniziana Mpiondana Aterineto Ny Famonoana Toniziana Iray Tao Iraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2011 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Vao maraina be ny 16 Novambra, notanterahan'ny manampahefana Irakiana ny famonoana ho faty an'ilay Toniziana, 27 taona, izay voaheloka ho nanao asa fampihorohoroana tany Iraka. Niditra tany Iraka i Trigui fony mbola izy 19 taona monja.
Ny 20 May 2006, nosamborin'ny tafika Amerikana izy, ary taty aoriana kely, io taona io ihany, dia nohelohin'ny fitsarana ao Bagdad ho faty izy noho ny fanondroana azy ho nandray anjara taminà fanapoahana baomba tamin'ny toeram-pivavahana Shi'a iray isan'ny masina indrindra. al-Askari shrine, tao an-tanànan'i Samarra, ary famonoana mpanao gazety iray avy amin'ny fahitalavitra Al-Arabiya, Atwar Bahjat. Ilay fanapoahana baomba dia nandrehitra ny afon'ny tsy fifandeferana ara-pinoana teo Sunnits sy ny Shi'ites tao Iraka.
Tamin'ny 2009, ary noho ny tsy fahampian'ny porofo, nahantona aloha ilay fanamelohana azy ho faty, ary nahazo sazy 15 taona an-tranomaizina i Trigui noho ny fidirana ”tsy nahazoana alàlana ny faritra Irakiana.” Manamafy ny fianakaviany fa, ny Febroary 2011, ary tao anaty antso an-telefaona, no nilaza tamin'izy ireo izy fa izy dia nosaziana ho faty indray – fitsarana tsy natrehiny.
Nanoratra [ar] ny rainy tao amin'ny pejy Facebook “Tous pour que Yosri Trigui rentre chez lui ,en tunisie [fr]” ( Isika Rehetra Miara-mirona Hamerina an'i Yosri Triqui hody any Tonizia):
Ny Alahady 6 Febroary 2011, izy [Yosri Trigui] dia niteny tamintsika fa nahazo hafatra avy amin'ny Minisitry ny Fitsarana Irakiana, nilaza taminy fa izy dia voampanga ho faty indray tamin'ny fitsarana tsy nifanatrehana ary tsy natrehan'ny mpisolovavany,noho ireo vesatra teo aloha nanenjehana azy.
Tamin'ny Jolay 2011, Amnesty International dia nangataka tamin'ny manampahefana Irakiana mba hanolo ilay fanamelohana ho faty mahazo an'i Trigui, izay ”voaheloka ho faty taminà fitsarana toa tsy nanaraka akory ny fepetra iraisam-pirenena ho an'ny fitsarana tsy miangatra”, hoy ilay fikambanana ao anatin'ny fanambaràny.
Araka ny ambaran'ny Amnesty, Trigui dia isan'ireo olona 11 nenjehina noho ny asa fampihorohoroana, tsy maintsy hahantona amin'ny 16 Novambra.
Nampizarazara ireo Toniziana mpiondana aterineto ny famonoana an'i Trigui. Misy ireo mino, fa noho ny nandraisany anjara tamin'ny famonoana olona am-polony maro tsy mana-tsiny, dia mendrika azy ny fanamelohana azony
@djerbafr nandefa siokantsera hoe [fr]:
avant de pleurer l’exécution de #yossritriki ayez une petite pensée pour la famille des centaines de ses victimes!
Alohan'ny hitomaniana ny famonoana an'i Yosri Trigui, dia mandeha any amin'ny fianakavian'ireo olona anjatony maro novonoiny aloha ny saina aman'eritreritra.
Le supplice du Pal manampy hoe:
Mpanao asa fampihorohoroana anie izy e…inona no mahatezitra?
Ireo izay tohina tamin'ny nahazo an'i Trigui dia manamafy fa ny fitsarana azy dia tsy araka ny fenitra iraisam-pirenena, ary mety ho voasàsa atidoha izy no nahatonga azy hahavita zava-doza toy izany.
Ilay bilaogera, Tarek Kahlaoui, dia nanakiana ny governemanta tetezamita ankehitriny ho tsy nanao na inona na inona hamonjena azy [ar]:
Ny vaovao momba ny famonoana an'i Yosri Trigui dia tena maharary ho an'ny fianakaviany sy ny Toniziana maro, indrindra indrindra fa izy tsy mba nahazo fitsarana tsy miangatra (…) Beji Caid Sebsi [PM ankehitriny], na Mbezaa (President ankehitriny) dia tokony mba nanao hetsika ”ofisialy” (hanakànana ilay famonoana) mba, farafaharatsiny, ho lany lainga ny manampahefana Irakiana ka tsy hiroso amin'ny famonoana an'i Trigui.
Tarek Kahloui dia nandrisika ny manampahefana Toniziana mba hirotsaka an-tsehatra ho famonjena ny ain'ireo Toniziana hafa voaheloka ho faty ao Iraka.
Mbola misy Toniziana mifonja, izay tsy mbola nahazo ny fitsarana sahaza azy, ao Iraka. Andraikitry ny manampahefana Toniziana vaovao ny miaro ny zon'izy ireny hahazo fitsarana tsy miangatra, izay zon'ny Toniziana tsirairay any ivelan'ny fireneny
Tarek Cheniti manipika hoe [fr]:
Kiriko tamin'ny fanambaràna ilay famonoana an'i Yosri Trigui tany Iraka. Atsaharo ny herisetra, ampy antsika izay
Pejin'ny Ministeran'ny Solika Irakiana Taorian'ny Fijirihana Azy. Sarin'i Yosri Trigui Miaraka Aminà Hafatra Iray Avy Amin'ilay Mpijirika
Ho fanoherana ilay famonoana, Toniziana iray mpijirika antsoina hoe GlaDiaT0R no nitsofoka tamin'ny pejin'ny Vohikalan'ny Ministeran'ny Solika Irakiana. ”Tsy adinonay, Tsy ho avelanay, tsy hoe tsy misy anarana izahay, Toniziana izahay. Ho avy izahay’ io no hafatra navoakan'ilay mpijirika, somary nakàna tahaka ny fomban'ilay vondrona iraisam-pirenen'ny mpjirika, Anonymous.
Mandritra izany, ny mpanoratra ilay bilaogy Boukornine dia miampanga an'i Yosri, rainy, sy ny mpitarika Islamista Rached Ghannouchi, ary ireo Toniziana vato nasondrotry ny tany [fr]:
Ampangaiko ho vendrambendrana ihany i Yosri Trigui, ary adaladala, nanaiky norebirebena, nosasàna atidoha sy nolalaovina (…) Ampangaiko izy [Rached Ghannouchi] tamin'ny fanomezana toky fitaka ho an'ny daholobe [andro vitsy nialoha ny famonoana, nanamafy izy fa nanome toky azy an-telefaona ny filoha Irakiana fa tsy hamono an'i Yosri] (…) Ampangaiko ireo Toniziana vato nasondrotry ny tany tamin'ny tsy fitarihan-dàlana ity tanora ity (…) Ampangaiko ny rain'i Yosri Trigui amin'ny fankalazàna ny fahafatesan-janany amin'ny fomba kidaladala sy tsy misy fotony, sy ny tsy fanekeny fa tsy nahavita ny nanabe ny zanany izy, amin'ny tsy naha-teo azy hitantana ny diany, rehefa nanomboka nanana izao hevitra mamoa-doza izao izy (…) Manorotoro ahy ny fahalasananao ry Yosri. Mahatonga henatra ho ahy ny famonoana anao. Mijery anao aho, nefa tsy mahita mpampihorohoro.
Faranan'ny mpanoratra amin'ny hafatra iray ho an'ny ray aman-dreny rehetra ilay lahatsoratra :
Hazavao amin'ny zanakareo fa ny tena Jihad (Ady Masina) goavana, sy faran'izay be voninahitra dia ny fahombiazana any an-tsekoly, lasa olom-pirenena mendrika, mahita asa fivelomana, manorina fianakaviana ary miaina finaritra.